Thursday, 04.09.2020, 06:23pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 01.16.2012, 04:41pm
शिक्षाको चेतनाले नै मानिसलाई सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्छ । तर यतिबेला मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकन गर्ने हो भने बेरोजगारको उत्पादन र विदेशमा युवा शक्तिको निर्यात गर्ने जस्तो मात्र देखिन्छन् । राजधानी लगायत देशका प्रतिष्ठित भनेर प्रचार गरिएका अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूको पहिलो उद्देश्य भनेको विदेश जाने हुन्छ ।
Monday, 01.16.2012, 04:40pm
संसदीय व्यवस्थाका आदर्श र व्यवहारको प्रतिकूल आचरणमा लागेर सत्तामा दाईं हाल्दै स्वार्थसिद्ध गरिसकेकाहरूले नै आज आएर संसदीय व्यवस्था ठीक छैन भन्नु नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो छ भन्नुजस्तै हो ।
आमाको अवशानबाट मन विचलित भएपछि चिन्तनशून्य हुन पुगिएछ : तारा सुवेदी
Monday, 01.16.2012, 04:39pm
परिवारभित्रका कुनैको अवशान सबैका लागि अत्यन्त पीडादायी नै हुन्छ । त्यसमा पनि आफ्ना आमाबाबुको माया छायाको न्यानो छहारी ढल्नु र आफ्नै हातले मुखाग्नि दिई चितामा जलेको देख्नुपर्दाको बेलाको दुःख र पीडा शब्दद्वारा अभिव्यक्त गर्न नसकिने र अनुभूतिजन्य मात्र हुने तथ्यलाई त्यस्तो बज्राघात भोग्नुपरेकोहरूले मात्र बुझ्न सक्छन् भन्नेमा विवाद छैन ।
Monday, 01.16.2012, 04:37pm
जनआन्दोलन–२ पछि मुलुकले कुनै राष्ट्रिय दिवस पाएको छैन । त्यसअघि हरेक वर्षको पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्थ्यो । लोकतान्त्रिक भनिने सरकार गठन भएपछि त्यसलाई हटाइयो । अहिले राष्ट्रिय दिवस पुस २७ लाई मान्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन् ।
Monday, 01.09.2012, 03:31pm
पृथ्वीनारायण शाहको जीवनचर्याको व्याख्या र विश्लेषण गर्नेहरूले उनलाई राजाका रुपमा मात्र हेर्दैनन्, नेताका रुपमा पनि हेरेका छन्, विद्वानका रुपमा पनि हेरेका छन् । दुरदर्शी, साहसी, धीरवीर र तत्ववेत्ता ज्ञानीका रुपमा पनि वर्णन गरेका छन् ।
Monday, 01.09.2012, 03:30pm
आजको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा जातीय संघवादीहरूले सर्वसाधारण जनतामा विभाजनको मनस्थिति तयार पार्ने काम गरिरहेका छन् । तर यथार्थ के हो भने जनता वास्तविकताबाट अनभिज्ञ छन् । जातीयता र संघीयताका दुष्परिणाम जनताले बुझ्नै पाएका छैनन् ।
» शान्ति र संविधानका तगाराहरू यथावत्
» दलहरूको इमान्दारीताप्रति चौतर्फी प्रश्न
» शान्ति र क्रान्तिमा को बालियो ?
» शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अहिले पनि सान्दर्भिक
» हिजो मिल्यो, आज विवाद
» भारत रिझाउन घातक शैक्षिक मान्यता
» स्वेच्छाचारिताको चरम नमूना
» सचिव सीपी गजुरेललाई मातृशोक
» पत्रकार तारा न्यौपानेको असामयिक अवशान
» शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यतालिका अबरुद्ध : संकट गहिर्याउन सरकार नै अग्रसर
» कार्यतालिका अनुसार काम भएन
» अप्राकृतिक गठबन्धनको रहस्य खुल्दै
» माओवादीले के गर्ला ?
» गच्छेदार चीनमा
» भीडको मात्र निर्देशन मान्ने प्रवृत्ति
Page 110/118: « :: ... 107 108 109 110 111 112 113 ... :: »